Nin ka mid ahaa madaxda dadka tahriibiya oo maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Nin ka mid ahaa madaxda dadka tahriibiya oo maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho
Nin magaciisa lagu sheegay C/qaadir Cumar Cabdulle islamarkaana ka mid ahaa madaxda dadka tahriibiya ee dalalka Sudan iyo Libya ayaa lagu qabtay dalka Koonfurta dalka Sudan, isagoona kadib maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
C/qaadir Cumar Cabdulle oo la sheegay inuu la shaqeysan jiray magafayaasha dadka tahriibiya ee xarumaha ku leh gudaha dalalka Libya iyo Koonfurta Sudan, ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay ciidamada booliiska Koonfurta Sudan.
Ninkaasi oo markii dambe lagu wareejiyay ciidamada loo yaqaano Interpol ee booliiska aduunka ayaa ugu dambeyn laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadibne lagu wareejiyay ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo si hoose ugu waramay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ninkaasi uu haatan ku xiran yahay xarunta dambi baarista CID-da ee ku taalla magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfurta dalka Sudan Xuseen Xaaji oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadaal badan kadib lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo C/qaadir Cumar Cabdulle oo ahaa tahriibiye weyn oo la shaqeysta Magafayaasha dadka ka tahriibiya dalalka Koonfurta Sudan iyo Libya.
Waa markii ugu horeeysay ee la qabto nin loo heysto inuu la shaqeysan jiray Magafayaasha dadka tahriibiya ee ka shaqeeya dalalka Libya iyo Koonfurta Sudan, kaas oo dhibaatooyin isugu jira jirdil, kufsi iyo waliba lacag madax furasho ah ka qaadan jiray dadka tahriibiya.
Dhawaan ayay ahayd markii baraha ay bulshada ku xiriirto lasoo dhigay muuqaalo argagax leh oo jirdil baahsan loogu geysanayo muwaadiniin u dhashay dalka Soomaaliya, kuwaas oo laga doonayay inay ehelkooda bixiyaan lacag madax furasho ah.